Plasma sitere na ndị mmadụ gbakere na COVID-19 nwere ike inyere ndị ọrịa nọ ugbu a aka
Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Plasma sitere na ndị mmadụ gbakere na COVID-19 nwere ike inyere ndị ọrịa nọ ugbu a aka
Mịnye nke plasma ọbara nke ndị gbakerela n'ọrịa nje na-efe efe na-enye nwere ike inyere ndị ọrịa ndị ọzọ nọ n'ụlọ ọgwụ COVID-19 aka, otu nnyocha ọhụrụ nke mba ụwa na-egosi.
Ọgwụ a, nke a maara dị ka plasma convalescent, ka ndị nchịkwa nri na ọgwụ ndị US (FDA) na-ewere dị ka nnwale. Plasma nwere ọgwụ mgbochi ọrịa, protein ọbara bụ akụkụ nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ. Emebere ha ka ha nwee ike itinye aka na nje na-akpata COVID-19, SARS-CoV-2, ọgwụ mgbochi na-egbuke egbuke ma kpado ya maka iwepụ ya n'ahụ, ndị nchọpụta kwuru.
N'ịbụ ndị ndị nchọpụta na-eduzi na NYU Grossman School of Medicine, ọmụmụ ahụ gosiri na n'ime ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị 2,341, ndị natara ntụtụ nke plasma convalescent n'oge na-adịghị anya mgbe ụlọ ọgwụ gasịrị, 15% erughị eru ịnwụ n'ime otu ọnwa site na COVID-19 karịa ndị na-enwetaghị. nweta plasma convalescent ma ọ bụ ndị natara placebo saline na-adịghị arụ ọrụ.
N'ụzọ doro anya, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na nnukwu uru maka ọgwụgwọ ahụ bụ n'etiti ndị ọrịa na-enwekarị nsogbu maka nsogbu siri ike n'ihi ọnọdụ ndị dịbu adị, dị ka ọrịa shuga ma ọ bụ ọrịa obi. Ọgwụgwọ, nke nwere ọgwụ mgbochi ọrịa na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ na-alụso ọrịa ọgụ dị mkpa iji lụso ọrịa ahụ ọgụ, yikwara ka ọ na-abara ndị nwere ọbara ụdị A ma ọ bụ AB uru.
Ihe nchoputa ihe omumu nke ugbua, nke e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ JAMA Network Open online Jan. 25, sitere na nchịkọta nke ozi ndị ọrịa sitere na ọmụmụ asatọ e mechara na United States, Belgium, Brazil, India, Netherlands, na Spain na mmetụta nke convalescent. plasma maka COVID-19.
Uru ndị a nke ọgwụgwọ ahụ nwere ike ịpụta ìhè ka data ndị ọzọ sitere na ule ndị a dị, ka Troxel, onye prọfesọ na Ngalaba Na-ahụ Maka Ahụ Ike Mmadụ na NYU Langone na-ekwu. Nke a bụ n'ihi na data sitere na nnwale nke onye ọ bụla pere mpe iji gosi mmetụta ọgwụgwọ ahụ nwere na mpaghara ndị ọrịa, ọ na-ekwu. Ụfọdụ ọmụmụ ihe n'otu n'otu egosila usoro ọgwụgwọ adịghị arụ ọrụ ma ọ bụ nke nwere oke uru.
Onye nyocha nyocha Eva Petkova, PhD, kwuru na ndị otu ahụ na-eji data ọmụmụ ya mepụta usoro akara nke ndị na-akọwa onye ọrịa, gụnyere afọ, ọkwa COVID-19, na ọrịa ndị dị na ya, na-eme ka ọ dịrị ndị dọkịta mfe ịgbakọ onye kwụ ọtọ. iji rite uru kachasị site na iji plasma convalescent.
Maka ọmụmụ ihe ahụ, ndị nchọpụta chịkọtara ozi ndị ọrịa niile site na obere, nyocha ụlọ ọgwụ dị iche iche gbasara ọgwụgwọ plasma convalescent, gụnyere nnwale na NYU Langone, Albert Einstein College of Medicine na Montefiore Medical Center, Zuckerberg San Francisco General Hospital, na Mahadum Pennsylvania na Philadelphia. Ndị na-eme nchọpụta tụrụ anya na uru ma ọ bụ adịghị ike ọ bụla na ọgwụgwọ ga-adị mfe ịhụ n'etiti ihe nlele kachasị nke ndị ọrịa nwere ike ime. A na-ahazi ule niile ma chịkwaa ya, nke pụtara na onye ọrịa nwere ohere na-enweghị usoro nke ekenye ya ka ọ nata plasma convalescent ma ọ bụ na ọ gaghị enweta ya.
Gụnyere na nyocha ahụ bụ data sitere na ọmụmụ US multicenter ọzọ bipụtara iche na Disemba 2021 na JAMA Internal Medicine. Ọmụmụ ihe ọmụmụ ahụ na ndị ọrịa 941 nọ n'ụlọ ọgwụ nwere COVID-19 gosiri na ndị ọrịa na-anata ọgwụgwọ plasma dị elu ọ bụghị na ọgwụ ndị ọzọ, dị ka remdesivir ma ọ bụ corticosteroids, nwere ike irite uru na ọgwụgwọ plasma ọbara. Onye nyocha ngalaba-primary Mila Ortigoza, MD, PhD, onye osote prọfesọ na ngalaba nke Medicine na Microbiology na NYU Langone, na-ekwu na nsonaazụ mbụ ndị a kwadoro echiche ahụ na plasma convalescent nwere ike ịbụ nhọrọ ọgwụgwọ enwere ike, ọkachasị mgbe ọgwụgwọ ndị ọzọ akabeghị. dị, dị ka na mmalite nke ọrịa na-efe efe.
Na mgbakwunye, plasma convalescent anakọtara site na ndị butere ọrịa mbụ yana mechaa nye ya ọgwụ mgbochi (VaxPlasma) ga-enwe ọgwụ mgbochi ọrịa n'ọtụtụ zuru oke na ụdị dị iche iche nke nwere ike inye mgbakwunye nchebe megide ụdị nje na-apụta, Ortigoza kwuru. Nje Virus na-agbanwekarị mkpụrụ ndụ ihe nketa (na-enweta mgbanwe na-enweghị usoro na koodu DNA ha ma ọ bụ RNA ha) n'oge ọrịa ọ bụla na-efe efe. N'ihi nke a, plasma convalescent nwere ikike ịnye ọgwụgwọ dị irè ngwa ngwa mgbe mgbanwe ndị dị otú ahụ karịa ụdị ọgwụgwọ na-adịchaghị adị irè na oge ma ga-enwerịrị usoro nhazigharị iji lebara ụdị ọhụrụ dị iche iche anya, dị ka ọgwụgwọ monoclonal antibody.
Covid-19 DNA Drug Food na ọgwụ ọjọọ nchịkwa Health Medicine Pennsylvania San Francisco Spain
Ọnwụnwa Ọhụrụ maka ndị ọrịa nwere COPD
Ọmụmụ ihe ọhụrụ na-egosi ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 anaghị emetụta ọmụmụ ma ọ bụ ime mmalite
Saịtị Nova Scotia ịga leta. Parks Canada 2022 okpomọkụ...
Ụgbọ elu ntụrụndụ ọhụrụ Canada kpọrọ Toronto Pearson...
Market Induction Cap Liner Market 2022 Key Players, SWOT...
Ọtụtụ anwụ maka obere ego: anwụ anwụ kacha ọnụ ...
Ndụmọdụ 3 bara uru maka otu esi eme atụmatụ ezinaụlọ na-atọ ụtọ...
Dịkarịa ala otu onye nwụrụ, 12 merụrụ ahụ n'ihe mberede ụgbọ oloko Austria
Iji Neurofeedback iji gwọọ riri ahụ na uche…
Nkwupụta maka nyocha nke ọnwụ na Exuma sitere na...
ITA Airways mbụ onye ọrụ Italiantali nke Airbus A350
Onye mmeri ọtụtụ ihe nrite Pop Artist Lewis Capaldi adịla njikere…
Ndị egwuregwu bọọlụ siri ike 2022, nyocha SWOT…
Hotellọ oriri na ọṅụṅụ Philadelphia na-eme ndepụta nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ mere eme ...
Ụjọ na Jeddah mgbe ndị njem na-abịa maka Formula 1…
Calgary gaa London Heathrow ụgbọ elu ọhụrụ anaghị akwụsị akwụsị
Ụgbọ elu Southwest na-ewepụta Wanna Get Away Plus
Ngalaba njikwa igwe (ECU) Ahịa: Uru Chain...
Ọrịa norovirus na ọrịa eriri afọ.
Ụgbọ mmiri ndị Rọshịa anaghịzi anabata n'ọdụ ụgbọ mmiri US
Ntuziaka ọgwụgwọ ọhụrụ maka ọrịa kansa na-adịghị ahụkebe...
Obere ose Outlook kpuchie azụmahịa ọhụrụ...
American Cancer Society na ASCO na-enyere ndị Ukraine aka ...
Ntụkwasị obi nke ndị njem na-arị elu
Ahịa Methyl Cyclohexane 2017 site n'aka ndị na-egwu egwu zuru ụwa ọnụ...